खनालको उपचारका लागि अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्‍यो ३० लाख -
खनालको उपचारका लागि अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्‍यो ३० लाख
काठमाडौ – नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा लगायतले विरो’ध गर्दा गर्दै नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालको उपचारका लागि ३० लाख रुपैया निकासा भएको खुलेको छ ।
सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई उपचारको लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार उपचार खर्च निकासा गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार बजेट निकासा भएको बताए । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि रकम निकासाको प्रक्रिया सुरु भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल हाल भारतमा उपचार गराइरहेका छन् । तत्कालीन केपी ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । गगन लगायत केही नेताहरुले विदेशमा उपचार गराएका नेतालाई उपचार खर्च पठाउनु का’नुन वि’परित हुने भन्दै विरो’ध जनाएका थिए ।
तर सो रकम ओली सरकारकै पालामा निकासा भएको बुझिएको छ । एमाले नेताहरुका अनुसार उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिनेछ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खनालको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस लगत्तै विरोधका स्वर उठेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पनि खनाललाई नै फोन गरेर उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने बताएका थिए । तर गगन थापाले सो कुरा लागू गर्न नमिल्ने भन्दै विरो’ध जनाएका थिए । खनालको विदेशमा उपचार गर्दा लागेको खर्च व्यहोर्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णय गैरकानुनी भन्दै विरोध भएकै बेला रकम निकासा भएको कुरा खुलेको हो ।
नेपालका १५ ओटा बैंकलाई ह्या’क गर्ने चेतावनी ? राष्ट्र बैंकका के प्रवक्ता भन्छन् ?
२४ घण्टामा को’रोना संक्रमित र निको कति भए ? अहिलेसम्म नेपालमा कति संक्रमित भए ?
नेपालमा को’रोनाको डेल्टा भेरिएन्ट सहित थप ३ भेरिएन्ट भेटिए, मन्त्रालयले निकाल्यो यस्तो सुचना